News – Page 67 – Burmese.asia
အမျိုးသမီးများကအတူ အိပ်ဖို့အလိုလားဆုံး ဘောလုံးသမား
အမျိုးသမီးများက၎င်းတို့နဲ့အတူအိပ်ဖို့ လိုလားတဲ့ဘောလုံးသမားတွေထဲမှာအသက် ၄၄ နှစ်အရွယ် ရှိ အင်္ဂလန်ကစားသမားဟောင်း ဒေးဗစ်ဘက်ဟမ်းက ဦးဆောင်လျက်ရှိနေကြောင်းသိရပါတယ်။ Ticketgum.comက ကောက်ယူတဲ့ စစ်တမ်းမှာ သားသမီးလေးဦးရှိတဲ့ ဘက်ဟမ်းဟာ စီရော် နယ်ဒို ၊ ဂျရူးတို့ကိုကျော်ဖြတ်ပြီး အမျိုးသမီးများက အတူအိပ်လိုတဲ့ ဘောလုံးသမားတွေ […]
သားဖြစ်သူရဲ့ အိတ်ဇောသံ ဆူညံလွန်းတဲ့ ဆိုင်ကယ်ကို မီးရှို့ပစ်လိုက်တဲ့ မိခင်
By Myo Min HtetPosted on March 6, 2020 March 6, 2020
လေးစားမိပါတယ် အဒေါ်ရယ် ဒီလိုလုပ်ပေးတော့ ပတ်ဝန်းကျင်က ကျေးဇူးတင်တာပေါ့ဗျာသထုံမြို့ လိပ်အင်းရပ်ကွက်တွင် သားဖြစ်သူရဲ့ ဘေးတွဲဆိုင်ကယ်အိတ်ဇော ညံလို့ မိခင်ဖြစ်သူမှ ပြုပြင်ခိုင်းသော်လည်းမပြုပြင်သဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို အားနာစိတ်ဖြင့်ဓာတ်ဆီလောင်းပြီး မီးရှို့လိုက်ကြောင်းသိရသည်။ (နေရပ်လ်ိပ်စာစုံးစမ်းခြင်းသီးခံပါ) မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘာအကျိုးမှမရှိဘဲ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဆူညံသံနဲ့ နှိပ်စက်နေတဲ့လူတွေ အများကြီးရှိပါတယ် […]
မရှိဆင်းရဲသူမို့ ဝမ်းစာအတွက် ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်နေရတဲ့ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက် သူဌေးဖြစ်သွားပါပြီ
ပရိသတ်ကြီးရေတကယ့်ကို ဝမ်းသာစရာသတင်းလေးပါ…မရှိဆင်းရဲသူမို့ ဝမ်းစာအတွက် ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်နေရတဲ့ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက် သူဌေးဖြစ်သွားပါပြီ အကြောင်းကတော့ ၁-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထွက်တဲ့ ထိုင်းထီပထမဆု ဘတ်(6)သန်း ဆု တစ်စောင်ကို ထိုင်းရောက်မြန်မာလုပ်သားတွေထဲက ထိုင်းနိင်ငံ ခိုလမြို့ ကြက်သားစက်ရုံတစ်ရုံမှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော ကိုဇေယျာမျိုးနဲ့ […]
ကင်ဆာရောဂါနဲ့ ပတ်သက်ပြီးအရင်လို ဓါတ်ကင်စရာမလိုပဲ အခြားနည်းလမ်းနဲ့ ပျောက်ကင်း သက်သာစေနိုင်မယ့် ဖြစ်နိုင်ချေနည်းလမ်းတွေကို သူ့ရဲ့ သုတေသနပြုချက်ကနေ ရှာဖွေတွေ့ရှိထားကြောင်း အမေရိကန်သိပ္ပံဘာသာရပ်မှာ ထိပ်တန်းပညာရှင်တဦးဖြစ်တဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီး ကင်ဆာဇီဝဗေဒပညာရှင် ဒေါက်တာရည်မွန်အေးက ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။ အခုလို ကင်ဆာရောဂါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး […]
မြန်မာရိုးရာကို သဘောကျနှစ်သက်လို့ ရိုးရာဝတ်စုံနဲ့ ရှင်လောင်းလှည့်နေကြတဲ့ နိုင်ငံခြားသားများ
မန်မာတိုင်းရင်းသားတွေမှာ ရိုးရာအလှကိုယ်စီ ရှိကြပါတယ်….မြန်မာပြည်ကို လာလည်ကြတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေကလည်း အဆိုပါရိုးရာအလှတွေကို သဘောကျနှစ်သက်သွားကြပါတယ်…မြင်ရုံနဲ့တင် နှစ်သက် သဘောကျရုံမက ကိုယ်တိုင်ပါ ဝတ်ဆင်လုပ်ဆောင်လာကြတာပ တချို့နိုင်ငံခြားသားတွေဆို မြန်မာ့သနပ်ခါးကို သဘောကျလို့ လိုက်လိမ်းကြပါတယ်..တချို့ကတော့ ပုဆိုးနဲ့ လုံချည်ကို သဘောကျပြီး လိုက်ဝတ်ကြပါတယ် ခုလည်းပဲ […]
COVID-19 မြန်မာပြည်ရောက်လာခဲ့ရင် ဘာတွေပြင်ဆင်ထားရမလဲ
တချိန်တုန်းက ကျားသောင်းကျန်းတာ တနယ်လုံးက ရွာတွေအကုန် ကျီးလန့်စာစားတွေဖြစ်။ ညကြီးသန်းခေါင်ကျားက အိမ်ပေါ်တက်ဆွဲမလား? လမ်းလျှောက်နေတုန်း ဗြုန်းကနဲ ချုံထဲကထွက်ဆွဲမလား? ထိတ်ထိတ်လန့်လန့်တွေဖြစ်၊ နေ့တိုင်း ကျားက ဘယ်ရွာကိုဝင်မွှေသွားသလဲ? ငါတို့ရွာကို ဘယ်နေ့ဝင်မွှေမလဲလို့ ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ စောင့်နေကြရပါတယ်။ အခုလည်း ထိုအတိုင်းပါပဲ။ […]
နိုင်ငံတွင်းက အမျိုးသမီးတွေကို ကလေးခြောက်ယောက်ယူဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ ဗင်နီဇွဲလားခေါင်းဆောင်
ဗင်နီဇွဲလား President Nicolas Maduro ဟာ နိုင်ငံ့လူ့အရင်းအမြစ်တိုးပွားစေရန်အတွက် အမျိုးသမီးတိုင်း ကလေးခြောက်ယောက်ယူဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ နိင်ငံရဲ့အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး မြှင့်တင်ရေး အစီအစဉ်တစ်ခုမှာ အမျိုးသမီးများကို ကလေးမွေးဖို့ အတန်တန်တိုက်တွန်းနေတာကို တွေ့ခဲ့ရ ပါတယ်။ ယခုလောလောဆယ်မှာတော့ ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံဟာ အစားအစာနဲ့ ဆေးဝါးပြတ်လတ်မှု […]
ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအတွက် (၉)ရက်တိုင်တိုင်အစားအသောက်တွေ လှူ ဒါန်းခဲ့တဲ့ ဝင့်ယမုံနိုင်
ကိုရိုနာတိုက်ပွဲတွင် စည်းလုံးမှုကို ပြသည့်အနေဖြင့် အိန္ဒိယပြည်သူ သန်းပေါင်းများစွာလျှပ်စစ်မီးများပိတ်ပြီး ဖယောင်းတိုင်များ ထွန်းညှိကြ
အုန်းသီးအရေးတော်ပုံမှာပါဝင်ရင်း အတိတ်တစ ဖွင့်ချပြတဲ့ ကျာပေါက်ရဲ့ဇနီဟောင်း ဇုံဇုံ
ကိုရိုနာတိုက်ပွဲတွင် စည်းလုံးမှုကို ပြသည့…
အုန်းသီးအရေးတော်ပုံမှာပါဝင်ရင်း အတိတ်တစ …